Vatatu vakanakisa vaviri vakapfeka mazano
Pizza Couple T-shati
King naMambokadzi Couple Hoodies
Hubby Wifey Vakaroora Hoodies
Mr Mai Couple Hoodies
Mambo naMambokadzi Couple Sweatshirt
Mr Mai Couple Sweatshirt
T-shati yaMambo naMambokadzi
Hubby Wifey Couple T-shati
Mr Mai Couple T-shati
RUDO Couple Hoodies
RUDO Vaviri Sweatshirt
RUDO Vaviri T-shati
Kuva muhukama ndiyo yakanyanya kunaka kunzwa munyika. Kana iwe uri muhukama, iwe unoda mumwe wako; ipapo, iwe unofanirwa kuratidza kumuda kwako. Kazhinji yenguva, hatizive kuti kuratidza rudo kwakakosha sekuda. Rudo mbiru yehukama hwese, izvo zvinopa simba kwazviri.
Kune nzira dzakasiyana dzekuratidzira rudo rwako senge iwe dzaunogona kupa maruva, teddy anotakura mbatya uye zvakasiyana siyana zvekudya zvinhu. Pamusoro pavo, zvipfeko zvese zvinoenderana zvevaviri vako zvinogona kushanda sechipo chakanakisa nekuti zvipfeko zvinogona kuchengetwa kwenguva yakareba. Unogona kugadzirisa izvizvipfeko zvinoenderana kune vako vaviri panguva dzakasiyana. Pano isu tichakurukura matatu mazano kune akati wandei ezvipfeko zvinoenderana nechimwe chiitiko.
1.Pamberi pekutora mifananidzo.
Muchato chivimbiso chakasimba kwazvo pasi rino. Wese munhu anomirira zuva rake remuchato nechido uye anoda kupemberera zuva rake zvizere. Kune michato, isu tine akasiyana mabasa pamberi uye mushure mezuva remuchato. Iyo yekufanotora photoshoot zvakare iri basa iro rakanyanya kudikanwa senge yemuchato photoshoot. Iyi pikicha kupfura inotora yako yekufungidzira manzwiro uye mufaro, uye zvinowirirana zvipfeko zvinowedzera zvakawanda kune aya manzwiro uye mufaro. Iwe unogona kupfeka zvipfeko zvakafanana, imwe ine izwi rekuti "Mr" uye imwe iine izwi rekuti "Mai" Sezvo aya mafoto ekufanoroora ari ndangariro dzisingaperi, zvipfeko zvinoenderana zvinowedzera mufaro uye mufaro ndangariro idzi.
Kune vakaroorana, zuva racho inzira inonakidza yekufarikanya kushamwaridzana. Inopa vakaroorana kuti vave nenguva yekuva nemumwe. Inovapa mukana wekunzwisisa sarudzo dzemumwe nemumwe uye zvavanofarira.
Kufananidza zvipfeko zvinogona kutora chinzvimbo chakakosha muhusiku hwako hwehusiku nekuti unogona kuendesa manzwiro erudo kuburikidza neizvi zvipfeko zvakagadzirwa Izvi zvipfeko zvinogadzira chisungo pakati pevakaroora. Kazhinji yenguva, isu hatigone kuratidza manzwiro edu nemazwi; panguva ino, tinogona chete kushandisa zvipfeko izvi kuratidza manzwiro edu.
Kufamba ndiyo inonyanya kufarira mutambo wevanhu vazhinji. Vazhinji vakaroorana vanowana mufaro wavo mukufamba kunzvimbo dzakasiyana. Kushanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana kunovapa nguva yekushandisa pamwe chete. Kufananidza zvipfeko zvinogona kuzadzikisa kufamba kwavo. Idzi zvipfeko dzinovapa ivo nekunzwa kwechisungo.
Kufananidza t-shirts, hoodies, uye zvipfeko zvinogona kushanda semubatsiri kurudo rwevaviri. Iwe unogona kupfeka madhirezi aya pazviitiko zvakasiyana.
Post nguva: Kubvumbi-08-2021
Isu tiri vakanyanya kunaka
Iyo yekudyira yeAustin inopa chikafu t ...
Nei vanhu vakaroorana vachifanira kupfeka zvipfeko zvinoenderana
Sei vaviri T-shirts ndiyo yakanyanya kunaka chipo